Somali News 04.06.2021 | KWIT
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warineysaa maalin kale oo aan dhimashadu u dhiman sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray in kabadan 500 oo kiisas cusub iyo kororka bukaanada cusub ee gobolka oo dhan, oo 18 isbitaal ladhigay magaalada Sioux City. Taasi waa isla heerka shalay.
In kabadan 120,000 Nebraskans ayaa laga talaalay coronavirus usbuucii la soo dhaafey, taas oo aheyd qiyaastii 106,000 usbuucii ka horeeyey. Gobolku wuxuu hadda u furay xaq u yeelashada tallaalka qof kasta oo jira 16 iyo wixii ka weyn.
Wadajir faneed maxalli ah ayaa ka helay koror magaalada Sioux City. Golaha magaalada ayaa ansixiyay heshiiska horumarinta iyo qiimeynta ee Farshaxanka Art SUX (Sioux). Waxay ku taal dhismaha Karlton ee Wadada 4aad. Dhismaha waxaa loo dayactiray maktabadda farshaxanka iyo goobta istuudiyaha.